Qaab siman oo loogu talagalay Cadastre - Geofumadas
Qaab siman oo loogu talagalay Cadastre
Luulyo, 2009 cadastre, egeomates My
Magacani wuxuu leeyahay warqad lagu soo bandhigay Seddexaad ISDE Congress, oo lagu qabtay Jamhuuriyadda Czech halkaas oo 2003.
Qorayaasha, dhammaan ITC iyo Waaxda Geodesy ee Jaamacadda Delft ee Tiknoolajiyada, ee Nederland.
Inkasta oo xiriirka aan soo bandhigo (Ingiriisi) uu leeyahay qalab dheeri ah oo dheeraad ah.
Qoraalka waxa ka dhigaysa soo jeedinta ah, waxaana laga yaabaa cadastre model ah, oo doonaya in ay ka fogaadaan hawl ah dadaallada shaqsi; halka dhexgalka ee xogta u dhexeeya portals noqon karaa mid xanuun yar ... Waan ka xunahay in yimaado hadda waxaan ka shaqeeya cadastre warqad fikradda ah. model Tani waxay bixisaa set oo ah xogta loo yaqaan "meel dadka ka dhaxaysa" aan yareysey particularities la weeyn laga yaabaa in la waafajiyaa Lahjadaha kala duwan oo ka jira dhulka dalka kasta, oo ay ku jiraan conformation hay'adaha, heerarka saxnimada, xirfad finaliter.
document waa mid aad u wanaagsan, qiiq weyn, waa natiijada dib u eegidda lagu daydo kala duwan ee dalalka sida Holland, El Salvador, Bolivia, Denmark, Sweden, Portugal, Greece, Australia, Nepal, Masar, Iceland, iyo dhawr dal oo Afrikaan iyo Carab . In ay qaybta hordhaca ah wuxuu qeexayaa dadaallada kala duwan qabanaya, oo ay ku jiraan Nice halkaas, Xoojiyaan, EULIS, heerka ISO, iyo heerarka berdaha Catastro 2014.
Cadastral Domain Model (CCDM)
Dukumeentiga wuxuu ka shaqeeyaa heerarka sawirada UML noocyada kala duwan ee sheyga, laga bilaabo saddexda mid ee ugu muhiimsan tirooyinka cadawga:
Nooca (Sheyga guryaha)
Xaq (Xaq ama isbeddel)
Tani waa mabda'a asaasiga ah ee cadastar kasta, oo raadinaya in la cusbooneysiiyo xiriirka u dhexeeya dadka iyo xuquuqda hantida maguurtada ah ee la helay, ha ahaato diiwaan ama xaqiiqda. Ka dibna fasalada gaarka ah ayaa lagu faahfaahiyaa mid kasta, iyaga oo leh midabyo gaar ah oo ay ku jiraan:
Fasallada shaxda sare
Geometry iyo Topology
Fasallada sharciga iyo maamulka
Xakamaynta isbeddelada taariikheed
Kadib marka ay dhammaato waxay sigaar-cabayaan sigaar-cabista sida sheyga loo isticmaali karo saddexda cabbir iyo kan sharciga ah. Nasiib daro koobiga Spanishka kuma jiraan midabada kala duwan ee dokumiintiga asalka ah iyo tayada tayada sawiradu waa mid cabsi badan, sidaas darteed waxaan ku talinaynaa inaad haysatid version Ingiriis oo gacanta ah. Sidoo kale waxa ku jira maaddada Isbaanishka, oo aan ku jirin mowduucyo sida tusaalooyinka lagu dhisay gml.
Moodhku wuxuu soconayaa wakhti dheer, maadaama inkasta oo ujeedadu tahay in la raaco ku dhawaaqista Cadastre 2014 ee laxiriirta geerida buugaagta gacanta iyo nolosha dheer ilaa qaabeynta, waxay ka gudbeysaa qaadashada erayga xaddidan ee "cadastre" halka ay alaabtu yihiin shirqoollada, ilaa " maamulka dhulka »oo leh aag dhul ahaaneed oo xudun u ah.
Xaqiiqada ah in heerarka TC211 ee OGC (Geometry iyo Topology) la soo dhoofiyo waxay culeyska siineysaa mawduuca OpenGIS. Laakiin dhammaadka, saameynteeda ayaa ah in la soo bandhigo sida looga faa'iidaysto baahida loo qabo hannaanka e-dawlada iyo xogta xogta, oo ka faa'iideysanaya isku-xirnaanta iyo tignoolajiyada macluumaadka.
Dukumiinti weyn, waxaan ku talinayaa in aan akhriyo oo aan ku hayno ururinta geofumadas sababtoo ah si dhakhso ah ama ka dib waxaad u baahan kartaa.
Halkan ayaad ka soo dejisan kartaa Nooca Isbaanishka Wasaaradda Dhaqaalaha iyo Maaliyadda ee Spain.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa qaybta Ingiriisiga ee Eurocadastre, inkasta oo faahfaahin dheeraad ah oo dheeraadka ah lagu arki karo buugga "Cadastre 3D ee caalamiga ah "
Dokumentiga loo soo gudbiyey halkan waa version 6, oo loo yaqaan '06 Moscow. Waxaa ka mid ah jumladaha soo jeediya ee lagu soo bandhigo version 5 oo ay ku jiraan dhismayaasha ku jira fasalka RRR iyo qaybta PartOfParcel si gaar ah faahfaahsan. Midkii ugu horreeyey ee la soo bandhigo bishii Sebtembar ee 2002, 5 ka dib markii Chrit Lemmen uu ku hawlanaa dhacdadii FIG ee Washington.
2012 CCDM waxaa loo yaqaana LADM, waana mid ka diiwaangashan ISO. Waxaa loo tixgeliyaa in LADM ay tahay kobcinta 2014 Cadastre.
Post Previous«Previous eCADLite: Beddel kale oo loogu talagalay Microstation
Post Next Diyaarin CAD ama Kaarka Isdiiwaangelinta?Next »
4 Jawaab: "Habka caadiga ah ee Cadastare"
Jose Guillermo Cardona Matta isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2013 at
Waan xiiseynayaa maaddada haddii aad ii soo diri karto macluumaad.
Anigu waxaan naftayda ku soo bandhigayaa qodobbada cadawga, maadaama aan helayo daraasad xirfadle ah oo ku yaal magaalada Guatemala, Guatemala, Central America .. Haddii aad sii wadi karto macluumaadka kuugu soo dirto boostada aan marwalba mahadsanid, mahadsanid.
Diseembar, 2010 at
Si aad u soo dejiso gabi ahaanba, xiriirada labada sadar ee ugu dambeeya waxaad si toos ah u dhagsan tahay ka dibna waxaad doorataa «keydinta isku xirka sidii» oo waxaad kuheli doontaa pdf.
José Lopez isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, culumo aad u fiican, fadlan u soo dir si buuxda emailkayga, mahadsanid.
Soodejiso Habka Sare (DEM)
Ka soo dejiso xogta heerkulka iyo roobab meel kasta oo dhulka ah adoo isticmaalaya Google Earth
30 Codsiyada GIS
Tilmaamaha iyo tabaha loo adeegsado halyeeyada ku jira ArcGIS Pro
Falanqaynta Faa'iidooyinka Caafimaadka Maskaxda ee Goobaha Cagaaran Isticmaalka GIS